Ny polisy ho an'ny fanaka dia ampiasaina rehefa tianareo ny hiaro ny tany amin'ny vovoka sy ny vovoka, manafina voka-dratsy kely, ratra , manome azy endrika madio sy tsara tarehy. Matetika, ny fitaovana fanondronana manokana dia ampiasaina ho an'ny antikelika, antika fanaka na zavatra lafo vidy izay tianao fa haingana araka izay tratra mba hitazonana azy amin'ny endriny voalohany.
Ny voka-dratsin'ny polisy sy ny fiahiana dia azo avy amin'ny fampiasana voka-pandrefesana maromaro ao amin'ny poloney. Ary afaka ampiasaina izy ireo na amin'ny fomba samirery na amin'ny alalan'ny rano iray.
Ny fitaovana mahazatra indrindra amin'ny fanalana volo dia ny savoka. Mety avy amin'ny voajanahary voajanahary na artifisialy izany. Ny fantsom-bokatra dia manjavozavo tsara amin'ny sehatra tsara, izay mahatonga ny fanaka ho madio kokoa amin'ny fisehoana, na izany aza, amin'ny fitambaran'ny polisy miaraka amin'ny savoka, ny solvent dia matetika ampiasaina izay manatsara ny fahandroana ny famolavolana, ary ity dia tsy tena tena ilaina ho an'ny rafi-panafody.
Ny karazana zavamaniry iray hafa dia silikôla. Tsara ny mizara, tsy mitaky ny fampidirana solventa iray, dia maina haingana. Saingy tsara ny manamarika fa ny polisy toy izany dia tsy hizaka ny fahalotoana goavana amin'ny fanaka ary natao ho an'ny fanodinana matetika.
Farany, ny soso-kevitra amin'ny amidin'ny asidra fasiana dia heverina ho mahasoa indrindra. Matetika izy ireo dia tsy anisan'ireo poloney, ary miaraka amin'ny silicone. Ny amid dia mora ampiharina amin'ny tavy, mameno ny rotsak'orana sy ny scratches, ary afaka manome koa ny fanamafisana ny rano ho an'ny faritra voapoizin'ny polisy.
Karazana emboka fanaka
Misy ihany koa ny karazana polisy ho an'ny fanaka, miankina amin'ny vokatra atolony. Ny polisy ho an'ny fanaka amin'ny rongony dia manome haingana ny rindrina, mameno ny fahasimbana madinika, azo ampiasaina be dia be, satria mitana tsara ny savoka amin'ny fiaramanidina voatsabo. Saingy eo amin'ny fanontaniany ny dian-endritsoratra na tsindrimandry hafa dia mety hipoitra haingana, raha tsy ampiasaina amin'ny fomba tsy ara-drariny ny fanaka napetraky ny fikambanana toy izany. Ny fantson-damba dia misy: singa avy amin'ny orinasa Amway, Hado, ary, angamba, ny polisy Pronto malaza indrindra avy amin'ny SC Johnson.
Ny polisy ho an'ny fanaka miaraka amin'ny vokatra manify dia antsoina koa hoe loko miloko mena ho an'ny fanaka. Araka ny mety eritreretinao dia misy ny loko matevina ao amin'ny rantsany izay mamelombelona ny lokon'ny fanaka. Ankoatr'izay, ny polisy toy izany dia manana fiantraikany amin'ny polisy, mamirapiratra, matetika izy ireo dia mampiditra zavatra izay manome voka-dratsy manohitra ny statique amin'ny fanaka, izay ahafahanao manala ny vovoka . Ho an'ny polisy fanoratana dia azonao atao ny mampiditra: polisy eo ambanin'ny marika 5+, mpitondra iray ho an'ny fikarakarana an'i Emsal.
Ny polisy amin'ny trano fanaka vita amin'ny varahina dia azo aseho amin'ny vondrona iray samihafa, fa tsy ny poline manerantany rehetra azo ampiasaina hiasa amin'ity akora ity. Tsara kokoa ny mividy ny fanoratana miaraka amin'ny fanoratana manokana, fa izy ireo dia mety amin'ny rindrina lacquered, raha tsy izany dia mety hampidi-doza ny hamela ny fahazavana voalohany na ny fisaraham-panambadiana. Ho an'ny asa amin'ny loko mandrakotra politique dia matetika ampiasaina: Pronto, Сhirton, Emsal, Luxus, Diva, Mebelux.
Farany, mendrika ny manasongadina ny firaiketan'ny polisy ho an'ny fanaka amin'ny rangotra. Matetika, ny karazam-bofon'izy ireo dia manome karazana varimosina, izay mameno ny fihenan-tsakafo kely sy manamaivana ny habaka, ka mahatonga azy ho tsara tarehy. Ny polisy amin'ny scratches dia azo hita amin'ny ankamaroan'ny tsipika malaza, fa ny tena mahazatra dia ireto manaraka ireto: Pronto, Emsal, Cinderella, Fairy Furniture, Diva, Luxus, Mebelux.
Ahoana ny fomba hanesorana ny tifitra amin'ny tapakila - ny tsiambaratelon'ny fanesorana ny ranomainty amin'ny karazana tapakila hafa
Ahoana ny fomba fialana amin'ny fofona ratsy ao amin'ny trano iray?
Miorina eo amin'ny rindrina - ahoana no fialana?
Ahoana no fomba hanamboaran-tsigara an-trano?
Sakafo avy amin'ny champignons
Stenosis ny aty
Nahoana no lolo?
Parotitis amin'ny olon-dehibe
Raha nikasika ny fankatoavana ny fitiavan-tanam-biraon-dry Beckham dia nahatonga ireo mpampiasa Internet
Inona ny jeanina amin'ny lamaody amin'ny taona 2014?
Brownie miaraka amin'ny kiririoka - sakafo matsiro tsara indrindra amin'ny entana vita amin'ny sôkôlà
Ny fitsaboana ny foetus isan-kerinandro
Kim Kardashian no niseho voalohany tao amin'ny fonon'ny Forbes
Totozy mody 2016 ho an'ny zazavavy
Ahoana no handrahoana ny hatsiaka?
Potrao amin'ny fotoana fohy